Ụgbọ ala ụgbọala na Gran Canaria - Akwụkwọ na Carrentalchoice.com
Ụgbọ ala ụgbọala na Gran Canaria
Jiri ụgbọ ala ụgbọ ala dị na Spain
Chọta ụgbọala ala ụgbọ ala na Gran Canaria
Ịkọ ụgbọ ala na Gran Canaria
Ọ bụrụ na ihe ị chọrọ site na ezumike bụ ụfọdụ anwụ anwụ, ájá ájá, na ebili mmiri na-arụsi ọrụ ike, ebe dị egwu, nke nwere ọtụtụ ọrụ, ụlọ ahịa na ụlọ oriri na ọṅụṅụ - mgbe ahụ, ntụpọ a kwesịrị nleta.
ebe ị ga-eme njem?
Ịkwụ ụgwọ na Ngosipụta na-adọba ụgbọala dị n'ofe obodo ahụ, ma n'okporo ámá, ma ọ bụ na ụlọ ahịa ịzụ ogige ntụrụndụ.
Kedu onye na-adịghị achọ ịhụ ọgba n'ọgba ezumike? Na saịtị a, ị ga-eleba anya na nke ọ bụla nke 290 nke a pịrị apị na nkume ihu igwe nke ndagwurugwu Calazebo. Site na ebe a, ma e wezụga nghọta na akụkọ ihe mere eme nke Gran Canaria, ị ga-enweta echiche ndị dị egwu na ugwu na n'ụsọ oké osimiri.
Ka ị na-agbanyụ okporo ụzọ GC-2 isi site na Guia, saịtị ahụ na-egosi n'ụzọ doro anya na a na-enwe ogige ntụrụndụ n'efu.
Ọnọdụ nke usoro a na-eme ka ọ ghara ịdị irè na golfer. Tinye klọb gị n'ime bọs nke ụgbọ ala ahụ, gbanye redio, gbadaa na windo ma jide ikuku n'ụzọ ị ga-esi gaa ebe a n'osimiri. Ndị na-egwu egwu nwere ike ịpụ n'oké osimiri ma chee na ha ahapụlarị ya kpamkpam, ma kpachara anya na echiche ahụ anaghị egbochi gị ịrịa ọrịa.
Echere oge na-aga n'ihu
4. Obodo Sioux
Yeehaw! Mkpu enyemaka nke onye na-egwu egwu nwere ike ọ gaghị abụ ihe ị ga-atụ anya ịnụ na otu n'ime Canary Islands, ma n 'uzuzu kpuchie ụgbọ gị, n'ihi na ị na-ekpuchi onwe gị na mpi ruo Sioux City dịpụrụ adịpụ Playa del Aguila. N'ịbụ nke e wuru dị ka ihe nkiri, Wild Wild obodo a bụ ebe a na-egosi, iri nri na ọbụna ụlọ anụ ụlọ, nke niile na-emeghe ruo mgbe mgbede.
A ga-adọba ụgbọala ma ọ bụ ịnyịnya niile mgbazinye n'èzí n'èzí ogige ogige.
5. Ọnwa ogwu Moonlight Masplomas
Enwere ihe dị iche iche maka inwe ike ịmalite n'elu ihe ndina, na-ekiri ihe nkiri n'okpuru kpakpando na mgbede balmy. Igosi fim abuo n'abali na inye ndi oru nlekọta zuru oke, ihe nkiri Cinema Maplo na-eme ka ezumike na nke puru iche na ezumike.
A na-adọba ụgbọala na mpụga sinima
Ebe ị ga-akwụ ụgwọ ụgbọ ala na Gran Canaria
Otu n'ime ama kachasị ama ma kachasi elu n'àgwàetiti ahụ dum. Ebe a nke oge ochie a na-efe ofufe dị mfe mgbe ọ bụla i werela ụgbọala akwụgogo elu. Ọ bara uru maka echiche naanị ya, were igwefoto gị.
esi aga ebe ahụ?
Site na ọdụ ụgbọ elu, gbasoro okporo ụzọ GC-196 n'ime ala ruo mgbe ọ ghọrọ okporo ụzọ GC-120. Nọgide n'okporo ụzọ a ruo mgbe ọ na-agbawapụ, ma were GC-130, GC-600 ga-esote ya dị ka Roque Nublo. Enwere ụgbọala n'ebe ahụ.
O doro anya na mmiri si n'ebe ọ bụla si apụta bụ paradaịs anụ ọhịa a n'ugwu ndịda. N'okpuru ubi na echiche dị omimi maka oké osimiri, ebe a bụ ezigbo mmiri. Were ezinụlọ iji hụ dolphins, meerkats, amphibians and birds exotic - ọ dị mma ịnweta ume nke ikuku si na ìgwè mmadụ nọ n'obodo.
Site na Maspalomas nke dị n'ụsọ oké osimiri ndịda, were okporo ụzọ GC-503 dị n'ebe ugwu maka 8 kilomita wee gaa n'aka ekpe, na-eso ihe ịrịba ama na ogige ahụ.
Obodo a dị n'ebe ugwu nke agwaetiti a maara dị ka Balcony nke North. N'ịbụ ugwu dị elu, ị nwere ike ịchọta àgwà dị ịtụnanya n'àgwàetiti ahụ n'ihu gị, ebe ọ na-asọga n'ebe ugwu ugwu na Atlantic Ocean. Ọ bụrụ na echiche ahụ adịghị enye ume ọhụrụ, buru otu karama nke Firgas Mmiri nke si na mmiri olulu mmiri dị na mpụga obodo ma tinye ya ebe a.
Site na ọdụ ụgbọ elu, were okporo ụzọ GC-1 n'ebe ugwu gaa Palma, soro GC-2 n'akụkụ ebe ugwu. Were aka ekpe mgbe ị na-ahụ GC-20 ka a kpọtụrụ Arucas ma soro ihe ịrịba ama ahụ gaa na Firgas si n'ebe ahụ.
Ọ bụrụ na ọkụ ahụ na-arịwanye elu, jiri nleta na nleta mmiri mmiri nke Stingray Cave na Barracuda Point dị na ebe ndịda ọwụwa anyanwụ nke Arinaga. A na-esi na ndị ọrụ dịgasị iche iche na-ebuga ụgbọ mmiri gaa n'ebe mmiri na-asọ asọ - dị ka ọ bụ ihe niile ị ga-achọ. Na-ere ahịa maka azụmahịa kacha mma.
Site na ọdụ ụgbọ elu, na-aga n'ebe ndịda na Autovia Las Palmas Puerto Rica. Gaa na Canal Calle ma soro ụzọ a n'ụzọ niile. Ndị ọrụ ga-adị mfe ịchọta ebe ahụ.
Okpukpe na-akwụsị maka di na Gran Canaria
Ma ị na-eme atụmatụ ezumike izu abụọ zuru ezu, nkwụsịtụ ngwụsị izu ma ọ bụ ọbụna na ezumike ọhụụ, enwere ọtụtụ ụzọ ị ga-esi nwee oge obi ụtọ na onye ị hụrụ n'anya na Canary Island. Chọta ụgbọ ala mgbazinye ụgbọ ala na Gran Canaria, buru CD nke abụ gị kacha amasị gị, gbapụta na ndò gị wee gaa rie ihe ọ bụla n'ime ọrụ ọkụ ndị a maka abụọ:
Ndị na-achọsi ike
Maka ume ike ma ọ bụ adventurous Twosomes, e nwere ọtụtụ ihe omume dị iche iche na-enye n'àgwàetiti ahụ. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ na ị na-eme ka mmiri nke Atlantic na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ, mgbe ahụ i nwere nhọrọ ị ga-eji sọfụ, nkwọ ụgbọ mmiri, ifufe, jet-ski, parascend ma ọ bụ ọbụna mee ka ụkwụ gị bụrụ ebe ị na-agba ụgbọ ma ọ bụ nke dị omimi ịkụ azụ. Ma, ọ bụrụ na nke ahụ anaghị atụgharị ụgbọ mmiri gị - ya mere ikwu okwu, ịnwere ike ịga n'ugwu ka ị gaa na-arịgo elu ugwu na ugwu ugwu, ma ọ bụ n'ugwu dị n'ebe ugwu iji rịgoo, abseil, ma ọ bụ dị ka ọgbọ na-atụ ụjọ n'akụkụ ọnụ ọnụ ugwu ahụ dị ka ebili mmiri dakwasịrị nkume ndị dị n'okpuru gị. E wezụga nke ahụ, ịnwere ike ịnya ụgbọ ala na ịnyịnya ma ọ bụ ọbụna gaa maka kamel gburugburu agwaetiti ahụ ma ọ bụ ime ụlọ.
Ma ihe ndị a emeela ka ị pụọ maọbụ na ị ga-ahọrọ ịchọta ụzọ ndị ọzọ dị jụụ iji soro oge na-ezukọ, ị gaghị enwe ike ime ihe na-ezighị ezi site n'ịgbagharị aka na aka na-ele ihe anya. Ọ bụrụ na ịchọrọ maka nzuzo, isi maka ịgagharị n'etiti ájá ájá n'akụkụ ụsọ oké osimiri ma ọ bụ gaa nleta na Jardín Botánico, nnukwu ogige nke dị n'Ebe Ugwu East nke nwere nhọrọ nke osisi nke ọ bụla nke Canary Islands na ngosi. Onye ọ bụla n'ime obodo na obodo nta ndị dị na ya kwesịrị ịga ileta ụlọ ahịa, ahịa, ụlọ ahịa na veranda. Ma ọ bụrụ na ị gaa Agüimes, ị nwere ike ịchọpụta oghere oge ochie, nke gbanwere n'ime ụlọ, ụlọ oriri na ụlọ na chọọchị. Ị nwere ike, n'ezie, na-eme ka ihe na-amasị gị site n'ịga ebe ọ bụla n'ehihie, ọdịda anyanwụ, ma ọ bụ n'okpuru ọnwalit, eluigwe jupụtara na kpakpando.
N'ụzọ a na-atụghị anya ya, ị nwere ike iri nri abalị ọ bụla n'àgwàetiti ahụ! Ma, olee ebe ọ ga-abụ ịhụnanya kachasị mma? Ị nwere ike ịkwanye ụgbọ ala ahụ na blanketị, nri dị mma na isi gaa ebe zoro ezo n'onwe gị, ma ọ bụ wepụta oge gị ka ị banye na ụlọ nkwari akụ gị wee gawazie n'otu n'ime ebe ndị a na-ekpo ọkụ:
Ebe a na-atụ anya na nkume si n'oké osimiri, ụlọ nri a dị na ogige nke 16th na-ere ahịa na narị afọ nke narị afọ, jupụtara n'ọbụ aka osisi na osisi. Ọ dị mma, na-akpachi anya ma na-enye nhọrọ nke ejikere ịhụnanya na-akwado Spanish efere.
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ a na-anọdụ ala n'ụsọ oké osimiri ma nwee ebe obibi n'èzí na ngosi nke osimiri. Ọ na-etinye onwe ya n'inye onyinye ọdịnala na efere. Jiri tapas jikọtara ya na oge a, gọọmet na-agagharị na gburugburu ọkụ.
Ndị ezinụlọ a na-azụ ahịa na-eme njem ọzọ iji nye gị oriri na-ekpo ọkụ na obere ụlọ nri ha na ọdụ ụgbọ mmiri dị na Puerto Rico ma bụrụ ndị ọkachamara na efere nke ihe oriri na-edozi ọhụrụ nke ndị ọkụ azụ mpaghara na-eweta n'ụbọchị ị na-eri nri.
Ị na-anọ na ezumike ịhụnanya na Gran Canaria ma ọ bụ na-enwe ọbụna ụbọchị ezumike mgbe ị nọ ebe ahụ ?! Kedu ihe nkwekọrịta ma ọ bụ ihe ị ga-akwado? Anyị ga-enwe mmasị ịnụ banyere ha!
Njikọ ndị bara uru:
Car mgbazinye ụgbọelu Barcelona Airport
Ụgbọ ala ụgbọala na Alicante Airport